MM TipSter Game
မူလ ဂိမ်း ကျော်မျိုးဟန် ဆိုဒ်လမ်းညွှန် အထူးဝိုင်းများ ဝင်ရန်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လိုက်ပဇစ် !!
လိုက်ပဇစ်ဟာ ကြားရင် အော့စ်ဘတ်ကွင်းမှာ ၁-၀ နဲ့ ရှူံးခဲ့ပြီးနောက်မှာ သုံးပွဲဆက်တိုက် နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးမှုနဲ့အတူ ယခု ဖရန့်ဖတ် နဲ့ပွဲမှာ ပြန်နိုးထဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ လိုက်ပဇစ်ရဲ့ အိမ်ကွင်း ကစားအားက ကောင်းမွန်ပြီးသားဖြစ်သလို ဒီပွဲမှာ ကြံ့ခိုင်မှု မပြည့်ဝခဲ့တဲ့ အဓိက ကစားသမားတွေလည်း ပြန်ပါဝင်လာနိုင်တော့မှာပါ။ အဝေးကွင်း ၂ပွဲဆက်တိုက် ဆက်တိုက်ဆိုသလို ကစားရတဲ့ ဖရန့်ဖတ်အဖို့ လိုက်ပဇစ်ထက်စာရင် ပိုပြီး ပွဲပန်းနေပါလိမ့်မယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲ မတိုင်မီ ပုံစံကောင်း ပြန်ရဖို့ လိုနေတဲ့ လိုက်ပဇစ်ကို အားပေးသင့်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လိုက်ပဇစ် ဆိုတဲ့ မနှစ်က ဆောင်ပုဒ်လေးကို သတိရရင်း .....။...........။
စောင့်ကြည့်ရမယ့် ကိုလုန်း နဲ့ ဂျီနိုအာ
ဒီည ကစားမယ့် ပွဲတွေထဲမှာ ကိုလုန်း နဲ့ ဂျီနိုအာ တို့ဟာ အိမ်ကွင်းမှာ ပြိုင်ဘက်တွေကို အနိုင်ရယူဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ နှစ်သင်းစလုံးဟာ ဒီရာသီအစ နိုင်ပွဲ မရကြသေးပါဘူး။ ဘုန်းမောက်ဟာ ရာသီအစ နိုင်ပွဲမဲ့နေရင်းကနေ အိမ်ကွင်းမှာ ဘရိုက်တန်ကို အနိုင်ရယူသွားခဲ့ပါတယ်။ ၀က်စ်ဟမ်းဆိုရင်လည်း နိုင်ပွဲမဲ့နေရင်းကနေ အိမ်ကွင်းမှာ ဟက်ဒါစဖီးလ်ကို အနိုင်ရယူသွားခဲ့ပါတယ်။ အက်စ်ပန်ညို ဆိုရင်လည်း နိုင်ပွဲမဲ့နေရင်းကနေ တနလာင်္ညမှာ ဆဲလ်တာဗီဂိုကို အနိုင်ရယူသွားပါတယ်။
အခု ကိုလုန်းက ဖရန့်ဖတ်ကို ဧည့်ခံရမှာ ဖြစ်ပြီး ဂျီနိုအာက ချီယေဗိုကို ဧည့်ခံရမှာပါ ။ အိမ်ကွင်းမှာ ကိုလုန်းက ဖရန့်ဖတ်ကို လေးကြိမ်ဆက်တိုက် အနိုင်ရထားပါတယ်။ ဂျီနိုအာကတော့ ချီယေဗိုကို အသာမရပါဘူး။ နောက်ပြီး ဂျီနိုအာမှာ ဒဏ်ရာပွဲပယ်တွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုလုန်းနဲ့...
ပရီးမီးယားလိဂ် =၆၀ နှစ်ပွဲ အောက်ကြေးအောင်မလား ???
စနေည ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲတွေမှာ ၀.၂၅ ၀င်ရိုး ဖွင့်လှစ်တဲ့ပွဲ ၃ပွဲ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ =၆၀ ကြေးဖွင့်လှစ်တာက ၂ပွဲပါ။ နယူးကာဆယ်က စတုတ်ကို =၆၀ အကျောပေးထားသလို လက်စတာကလည်း ဟက်ဒါစဖီးလ်ကို =၆၀ အကျောပေးထားပါတယ်။ အဲဒီ၂ပွဲမှာ အပေါ်အသင်းတွေအနေနဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လက်စတာက အရှိန်အ၀ါတစ်ခုနဲ့ တန်းတက် ဟင်ဒါစဖီးလ်ကို =၆၀ အကျောပေးလာပေမယ့် အဝေးကွင်း လုပ်နိုင်စွမ်းအားက ယုံစားလို့ မရပါဘူး။ အသင်းရဲ့ ခံစစ်ကစားပုံနဲ့ ကွင်းလယ်ပိုင်းက လိအပ်ချက်တွေ ရှိနေတာမို့ လက်စတာဟာ ဟက်ဒါစဖီးလ်ရဲ့ အိမ်ကွင်းမှာ ရလဒ်ကောင်းဖို့ မလွယ်ပါဘူး။
နယူးကာဆယ်ကလည်း ရလဒ်ကောင်းတချို့ ရနေပေမယ့် စတုတ်လို ခံစစ်မာကျောပြီး တိုက်စစ်ပိုင်း လျင်မြန်သွက်လက်တဲ့...
09 955 236 151
09 790 442 507
Copyright © 2018 MM Tipster Game. All rights reserved.